July 31, 2020 – Bachan Tv
Posted on July 31, 2020 July 31, 2020 by BACHAN TV
ललितपुरको सातदोबाटोस्थित स्तुति पशंसा मण्डलीका पा. अमर थापाका धर्मपत्नी स्वर्गीय एस्तर थापाको आज अन्तिम विदाई तथा श्रद्धाञ्जली सभा भयो । उहाँ २०७७ साउन ९ गते शुक्रबारको दिन विहान १०ः३० बजे प्रभुमा सुत्नु भएको थियो । उहाँको जन्म वि.सं. २०२२ कार्तिक १६ गतेका दिनमा भएको थियो । ५५ वर्षको उमेरमा उहाँ अनन्तको घरमा प्रवेश गर्नु भएको छ । उहाँ प्रभुमा सुत्नु भएको एक हप्ता पछि आज श्रद्धाञ्जली सभा भयो ।
सोही मण्डलीका एल्डर डेविट लेप्चाले परमेश्वरको वचनबाट सान्त्वना दिनुभएको थियो । उहाँले सच्चा गुरुआमाको भुमिका खेलेर स्वर्ग जानुभयो । परमेश्वरको वचनले हामीलाई मलमपट्टीको काम गर्दछ । हामीसँग जिउँदो आशा रहेको छ ।
विभिन्न व्यक्तिहरुले उहाँको बारेमा बताउनु भयो । उहाँको श्रीमान् पा. अमर थापाले आमापछि दोस्रो आमा रुपमा माया, प्रेम, वास्ता गरेको बताउनु भयो साथै स्तुति प्रशंसा मण्डली यहाँसम्म आउन उहाँको अतुलनिय योगदानको चर्चापरिचर्या गर्नुभएको थियो ।
स्वर्गीय थापाले क्यान्सर रोगको उपचार गराइ रहनु भएको थियो । उहाँको १ छोरा र २ छोरी रहेका छन् । उहाँको पार्थिव शरिरलाई चितवनमा समाधि गरिनेछ । नेपाली इसाई समुदायमा पनि स्तुति प्रशंसा मण्डलीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । उहाँको श्रीमान् पा. अमर थापा सो मण्डलीका संस्थापक पाष्टर हुनुहुन्छ । मण्डलीलाई देशविदेशबाट सान्त्वना पत्र, फोनहरु आइरहेको छ ।